UMikhail Baryshnikov - Ibhaleyi
UMikhail Baryshnikov uphakathi kwabaculi benkulungwane yama-20 neyama-21, kwaye uthathwa njengomnye wabadanisi ababalaseleyo ngalo lonke ixesha.
Ubomi bokuqala bukaMikhail Baryshnikov
Uzalelwe ngo-1948 eRiga, eLatvia, eyayiyinxalenye yeSoviet Union, uMikhail Baryshnikov ngoyena mntu udanisi webhaleyi oyindoda kwinkulungwane yama-20. UBaryshnikov waqala ukufunda i-ballet eneminyaka elithoba ekugqibeleni wafudukela kwiSikolo iVaganova, ingalo yoqeqesho esemthethweni IKirov Ballet ngelo xesha iLeningrad, ngoku eyiSt. Kulapho uBaryshinkov wathathwa phantsi kwephiko lika-Alexander Pushkin owayeqeqeshe inkwenkwezi enkulu yaseRussia URudolph Nureyev . Wajoyina iKirov eneminyaka elishumi elinesithoba njengomdanisi oyintloko, elona nqanaba liphezulu kuyo nayiphi na inkampani ye-ballet.
Imifanekiso yabaDanisi beBallet
Baryshnikov yenye yezona zininzi odumileyo Abadanisi be-ballet abangamadoda ngalo lonke ixesha, kunye noRudolph Nureyev kunye UVaslav Nijinsky . UBaryshnikov kunye noNureyev banokudunyiswa ngokwandisa isiseko se-ballet kwi-1960s, 70s kunye ne-80s, kunye ne-charisma yabo kunye namandla eenkwenkwezi; nangona aba babini babenobuntu obujamileyo kunye nobuchule obahluke kakhulu.
Ukusuka eLeningrad ngothando
Eyona ndima inkulu kaMikhail Baryshnikov inokuba sisigqibo sakhe sokuya e-United States ngelixa i-Kirov yayikhenketha eCanada ngo-1974. Ngenye imini e-United States, uBaryshnikov wamenywa ukuba ajoyine IAmerican Ballet Theatre Apho wayedanisa yonke indima eyintloko yamadoda, ukusuka kwizifundo ezomeleleyo ezinje UGiselle repertory yanamhlanje efana ne UApollo ebengafumaneki kuye phantsi kwenkqubo yeSoviet. Ukanti uBaryshnikov wayenqwenela ukusebenza nelizwe lakhe, oyena choreographer uGeorge Balanchine KwiNew York City Ballet , otyholwa ngokuzisa ibhaleyi enkulu eUnited States. Ngo-1979, uBaryshnikov wajoyina inkampani, kodwa emva kweenyanga ezilishumi elinesihlanu kunye neendima ezingamashumi amabini ezitsha, wafumana uBalanchine ekhupha ubuchule bakhe. Ngo-1980, uBaryshnikov wajoyina i-American Ballet Theatre kwaye waphumelela kuzo zonke iindima zakhe eziphambili ngelixa eqhubeka nokwandisa ii-horizons zakhe esebenza kunye ne-choreographer zangoku I-Twyla Tharp , Owadala imisebenzi efana Ukutyhala kuza kuTyhila kwaye ISinatra Suite ngokukodwa kuye. Baryshnikov wayekhonza njengomlawuli wenkampani ukususela ngo-1980 ukuya ku-1990.
Italente eyahlukileyo kaBaryshnikov
Ngaphezulu kwekhondo lakhe lomsebenzi, uMikhail Baryshnikov wadanisa ngaphezulu kwekhulu lemisebenzi ukusuka kwibala lomculo we-ballet ukuya kule mihla nangaphaya. Kwinqanaba lakhe, u-Baryshnikov wayesaziwa ngobuchule bakhe obunamandla kwaye phantse bugqibelele. Ukongeza, itoliki enesiphiwo esikhulu, zombini umculo kunye nokudlala.
Nangona iBaryshnikov icompact ezinyaweni ezintlanu, ii-intshi ezi-8 kodwa yayihlala ithathwa njengeqabane elihle nelinesisa, elinakho ukuphakamisa abadanisi nangaphezulu kunaye. Kwangelo xesha, ukudanisa kwakhe yedwa kwakuqhuma. Umgangatho womxhuzulane owenza abadanisi (kunye nabadlali bebhasikithi abanjengoMichael Jordan babonakale bexhoma emoyeni) kuthiwa yi 'ballon' kwihlabathi le-ballet kwaye uBaryshnikov wayenaso esi sipho. Abanye bathi uvuse inkumbulo yasentsomini yenkulungwane yama-20, uVaslav Nijinsky, kumandla akhe 'okubhabha' emoyeni. U-Baryshnikov wayeyinkosi ye-spin, ejika njengomphezulu kwaye ebonakala ngathi uyayima kwi-dime, uhlala ehambelana (kwiinzwane zakhe) nokuba amadolo ayegobile.
UMikhail Baryshnikov Kwisikrini
Ukuphuma kwefilimu kaBaryshnikov ngo-1977 Indawo yokuTshintsha wamenza ukuba atyunjelwe ibhaso kwiAkhademi. Kamva wabonakala kwiifilimu Ubusuku obuMhlophe kunye noGregory Hines ongasekhoyo, ngokunjalo Abadanisi . Uvele kumanqaku amathathu aphumelele amabhaso ka-Emmy kumabonwakude kubandakanya Baryshnikov kwiBroadway nge ULiza minnelli . U-Baryshnikov watyunjelwa ibhaso lika-Tony ngokusebenza kwakhe Imetamorphis kwiBroadway. Uyabazi abalandeli abancinci beTV njengoAlexander Petrovsky, indoda elahlekelwa nguCarrie Bradshaw eParis, kwisizini yokugqibela ye-HBO's Isini kunye neSixeko . Kutshanje ubebhanqiwe nompheki kunye nomcebisi ka-Alice Waters kuthotho lweSundance Channel Iconoclasts.
Impembelelo eqhubekayo kaBaryshnikov
Ngokuqinisekileyo umzimba wakhe wenza ukuba kuncitshiswe ukufikelela kwiindawo eziphakamileyo awazinyusayo ebutsheni bakhe kwaye wajika wajonga umdaniso wale mihla kunye nokukhulisa abadanisi abancinci ngeProjekthi yakhe yeWhite Oak Dance eyasungulwa kunye nomdwebi odumileyo wale mihla, UMark Morris . Okwangoku ukhenketha naba badanisi bancinci kwaye wenza nabo, ubuchule bakhe bunomda kodwa usabonisa ngokupheleleyo kwaye wakhe IZiko lobuGcisa laseBaryshnikov eManhattan.
Umdaniso Umdlalo Weslides Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi Iimpawu Nobuntu Isidanga Se-Intanethi Imifuno Igadi Usapho Movies
Indoda eyi-aries kunye ne-aries yomfazi ebhedini
uyenza njani indoda ye-libra ukuba ithande
yimalini ukubuyisela inaliti zepetroli
ungajola njani nomntu we-libra
ukuqala njani ishishini lokudubula elishisayo